Vaovao - Navoaka ny jiro LED Teyeleec TC316A-RGB New Style afaka mamoaka jiro RGB!
Navoaka ny Jiro LED Teyeleec TC316A-RGB New Style afaka mamoaka jiro RGB!
Tononkalo malaza iray nilaza fa "Ny alina maizina dia nanome masoko mainty ho ahy, fa ampiasaiko izy ireo hahitana ny mazava". Mazava ho azy fa ny hazavana dia tena ilaina foana amin'ny fiainantsika isan'andro. Misy jiro isan-karazany amin'ny fampiasana isan-karazany. Ny sasany ampiasaina amin'ny haingon-trano, ny sasany ampiasaina amin'ny arabe, ny sasany ampiasaina amin'ny hetsika ivelany toy ny lasy, fitsangatsangana. Raha nilentika ny alina dia milentika ny masoandro ary mifarana ny andro. Azontsika atao ny mamoaka Teyeleec TC316A-RGB ampiasaina amin'ny Vlogger, mpaka sary ary mpankafy sary. Ireo jiro horonantsary LED roa dia mifamatotra amin'ny hinge, samy azo aforitra sy ahodin-dàlana mankany amin'ny lalana maro. Azontsika atao fotsiny ny milalao azy io ho toy ny fitaovana miala sasatra.
Araka ny fantatsika rehetra, eo amin'ny tsena ankehitriny, ny tontolon'ny jiro LED dia mihamalaza kokoa, noho ny toe-javatra COVID-19, Led Video Light isan-karazany no ampiasaina amin'ny Fampisehoana Video amin'ny Laptop, Zoom Calls, Self Broadcasting, Live Streaming ary an-tserasera fampianarana! Na dia mandray anjara amin'ireto hetsika ireto aza izahay, amin'ny maha olombelona mahazatra anay, dia irinay ho tsara tarehy toa itony izay mitaky avo ny lokon'ny jiro LED. Ho an'ny TC316A-RGB, mety hahatratra izany2960Lux@0.5m , Hue azo ovaina amin'ny diplaoma 0 -360; Ny lokon'ny setroka dia azo ovaina amin'ny 0-100, CRI ＞ 97, TLCI ＞ 96 Famirapiratana avy amin'ny 0% -100% tsy azo atao; Ny mari-pana amin'ny loko 2600K (mafana) ka hatramin'ny 12000K (hatsiaka). Ny fampisehoana OLED dia manolotra famakiana marina ary mora ampiasaina amin'ny bokotra / bokotra.
Manaraka ny famoronana izahay! Ity dia taranaka vaovao an'ny alim-baravarankely rehetra azo zahana amin'ny sary RGB miaraka amina endrika mahafinaritra sy matevina ary fandidiana mora. Miaraka amin'ny loko 360 sy ny fanitsiana saturation haavo 100 ary ny vakana fanaovan-jiro maripana roa loko, ny hazavana fakana sary RGB azo aforitra dia manolotra loko sy seho maro karazana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola henjana ny toe-draharaha COVID-19, orinasa maro no mbola tsy afaka miasa any amin'ny birao, noho izany, lasa safidy ny asa an-trano. Miaraka amin'ny jiro horonan-tsary LED TC316A-RGB eo an-tànana, manantena izahay rehetra fa ho hitanao fa mahatalanjona sy mahagaga izany, ary hanana lafy tsara foana ianao amin'ny ho avy ary tsy isalasalana fa vonona ny hanana Teyeleec TC316A-RGB eo akaiky eo. ! Na inona na inona tontolo eto an-tany, dia mbola manana fahazavana foana isika!
Fotoana fandefasana: Nov-18-2020	BACK